इटालीको यू-१६ राष्ट्रिय टिमबाट खेलिसकेका विकास च्यासल युथ क्लबमा आबद्ध — Sanchar Kendra
१अध्यक्षमा लिङ्देनसँग हारेपछि कमल थापा फायर, क कसलाई के भने ?
२अब दैनिक दुई लाखलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइने
३सरकारमा आउने ओलीको घोषणा
४नेपाली कांग्रेस गण्डकीको मतगणना जारी, कुन उम्मेदवारको मत कति ? यस्तो छ ताजा परिणाम
५एमसीसी र महाअभियोग दलहरुबीच सहमति नभई अगाडि बढ्दैन- प्रचण्ड
६बर्थ डे’ मनाउन गएका युवा फर्किएनन, होटल मालिकसहित ११ जना पक्राउ परेपछि खुल्यो यस्तो रहस्य
७भारतमा ओमिक्रोनको सङ्क्रमण रोक्न मोदीले चाले यस्तो कदम, केछ नेपालको तयारी ?
८प्राधिकरण प्रमुखलाई आयो मा’र्ने धम्की, को हुन् धम्क्याउन व्यक्ति ?
९राप्रपाको नयाँ नेतृत्व चुन्न मतदान जारी
१०कांग्रेस गण्डकी प्रदेश कार्यसमितिमा मनाङका दुईसहित सात जना निर्विरोध
११६७ किसानलाई नगद राहत, अपांगता भएका २८ जनालाई सहयोग
१२ओलीले नारायणी किनारमा कार्यक्रम गरेपछि चितवन पुगेका प्रचण्डले दिए यस्तो अनौठो प्रतिक्रिया
इटालीको यू-१६ राष्ट्रिय टिमबाट खेलिसकेका विकास च्यासल युथ क्लबमा आबद्ध
एजेन्सी । इटालीको यू-१६ राष्ट्रिय टिमबाट खेलिसकेका विकास मेराग्लिया च्यासल युथ क्लबमा आबद्ध भएका छन्।
गत मंगलबार इटालीबाट नेपाल आएका विकाससँग च्यासलले शुक्रबार सम्झौता गरेको हो। अब उनले च्यासलबाट सिजनको सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग खेल्नेछन्। ए डिभिजन लिग कात्तिक २९ बाट सुरू हुँदैछ।
६ वर्षको उमेरमा इटाली पुगेका उनी १३ वर्षपछि जन्मभूमी नेपाल फर्किएका हुन्। इटालियन नागरिकले विकासलाई एडप्ट गरेर इटाली लगेका थिए।
इटालीको यू-१६ टिममा परेका उनले सिरि ए क्लब एटलान्टाको युथ टिमबाट पनि खेलेका थिए। उनी सन् २०१८ मा इटालीको यू-१६ टिममा थिए। त्यतिबेला उनले दुई पटक टिमबाट खेल्ने अवसर पाएका थिए।
यसअघि नेपाली राष्ट्रिय टिमका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले नेपालले विदेशमा रहेका नेपाली मूलका खेलाडीलाई खेलाउन पहल गर्नु पर्ने बताएका थिए।
साफ च्याम्पियनसिप २०२१ का दौरान अलमुताइरीले आफूले पनि विदेशमा रहेका नेपाली खेलाडीलाई खेलाउन कुरा गरेको बताएका थिए। त्यतिबेला उनले विकाससँग पनि कुरा गरेको संकेत गरेका थिए। विकासले नेपाली टिमबाट खेल्न उनको नेपाली नागरिकता हुनु पर्नेछ।
यसअघि नेपाली राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षक नियुक्त भएपछि अब्दुल्लाह अलमुताइरीले विदेशको युवा टिमबाट फुटबल खेल्ने दुई जना खेलाडीलाई प्रारम्भिक टिममा स्थान दिएका थिए।
गत चैत ३१ गते घोषणा गरिएको ३२ सदस्यीय टिममा कोरियामा फुटबल खेल्ने २० वर्षीय मनिष डाँगी र कतारी क्लबबाट खेल्दै आएका १९ वर्षीय श्यान्सु भुसाललाई समेटेका थिए। डाँगीले राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाएका थिए। डाँगीले राष्ट्रिय टिमबाट दुई गोल गरिसकेका छन्।
नेपाली खेलकुदलाई माथि उठाउन कुनै कसर बाँकी राख्दिन- घिसिङ